ပညာရေး ရာသီသစ် စပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပညာရေး ရာသီသစ် စပြီ
ပညာရေး ရာသီသစ် စပြီ
Posted by black chaw on May 29, 2012 in Creative Writing, Education, Know-How, DIY, Myanma News | 16 comments
မမှီမကမ်း လှမ်းကိုးကားလိုက်ဦးမယ် ကျောင်းအစ်မရေ။
အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး ရူးဆိုး (Rousseau) က ဆိုခဲ့မိန့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဗျာ။ ပြောရတာ အရသာ ရှိလိုက်တာ ဟေးဟေး။
“ပညာရေးဆိုတာ ဧကရာဇ်ကြီးဖြစ်ဖို့၊ တရားသူကြီး ဖြစ်ဖို့ မဟုတ်ပါ။ ပြည်သူပြည်သားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ရန် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း”
အဲဒီအဆိုအမိန့်ကိုပဲ ကိုးကားပြီး ရှေ့ဆက်ကြမယ်ဗျာ။
အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ပြည်သူပြည်သားကောင်းတွေ မွေးထုတ်ဖို့ ပညာရေးရာသီအသစ်ကတော့ စတင်ပြီပေါ့ခင်ဗျာ..။
ထူးထူးခြားခြား ဒီနှစ်က အခြေခံပညာမူလတန်း အဆင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အတွက် မသင်မနေရ အခမဲ့ပညာသင်စံနစ် ကို စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်မှာပါတဲ့။ ကျောင်းသုံးစာအုပ် အပြည့်အစုံနဲ့ ဗလာစာအုပ်ခြောက်အုပ် အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာပါတဲ့…။ ကောင်းတယ်ဗျာ။ ပေးနိုင်သလောက် ကို အခမဲ့ပေးတာ ကြိုဆိုရမှာပေါ့။ နောက်ပိုင်း ပေတံတွေ၊ ခဲတံတွေ၊ လွယ်အိတ်တွေ၊ ကျောင်းဝတ်စုံတွေပါ ပေးလာလိမ့်ဦးမှာ မြင်ယောင်နေသေး ဟေးဟေး။ အဲ..အဲ.. အဖျားမရှူးသွားဖို့တော့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လို ပြည်သူလူထုက ၀ိုင်းကြ၀န်းကြရလိမ့်ဦးမယ်နဲ့ တူပါတယ်ဗျာ။
နောက်တစ်ခု ထူးခြားတာလေးက ဒီ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်က စပြီး ပညာထူးချွန်ပြီး ကျောင်းဆက်လက်တက်ရောက်ရန် အခက်အခဲ ရှိသူတွေကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးတွေ နှစ်စဉ်ပေးအပ်သွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဘယ်လို စံနစ်တွေနဲ့ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ပေးမယ် ဆိုတာကိုလည်း ပွင့်လင်း မြင်သာ စေချင်ပါတယ် ကျောင်းအစ်မရေ။ တကယ် မတတ်နိုင်သူတွေ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရဖို့ကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေက စောင့်ကြည့်ပေးရလိမ့်ဦးမယ် ဗျ။ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေက အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ကိုယ်ဆွေကိုယ်မျိုးတွေပြန်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးပေးနေရင်လည်း မဟုတ်သေးဘူး လေ နော့…။
နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာက ကျောင်းအပ်ချိန်မှာ ကောက်ခံလေ့ရှိကြတဲ့ အလှူငွေကိစ္စလေးပါ။ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်လောက်က စတင်ပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေ ကျောင်းသားလက်ခံတဲ့အခါမှာ မည်သည့်အလှူငွေမှ ကောက်ခံခြင်းမပြုရ ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ထွက်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့။ ညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာမိတဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေ နှစ်စဉ်အရေးယူခံရတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်တဲ့။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတွေ ဆရာမကြီးတွေရဲ့ အခက်အခဲ အချို့လောက် ရေးပြလိုက်ပါရစေဦး။ ပညာရေးရာသီသစ် (စာသင်နှစ်အသစ်) အတွက် ပျက်စီးနေတဲ့ ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ အဆောက်အဦတွေရဲ့ အမိုး၊ အကာ၊ အခင်း၊ ပြတင်းပေါက်၊ ကျိုးပဲ့နေတဲ့ စာရေးခုံ၊ ထိုင်ခုံတွေ၊ ကျောင်းသင်ပုန်းတွေ ကွန်ပျူတာတွေ၊ အိမ်သာကိစ္စတွေ၊ သောက်ရေသုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိရေး စတာတွေကို ပြင်ဆင်ကြရပါသတဲ့ဗျာ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပညာရေးဌာနကြီးမှလည်း ငွေထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူးတဲ့။ ကောင်းရော။ ဘာနဲ့သွားလုပ်ကြမလဲ။ အခုလို ကျောင်းအပ်ချိန်မှာ အလှူငွေ ကောက်ခံမိရင်လည်း ဂိုးပေဦးတော့ အဝေးကို ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေခင်ဗျာ ခေါင်းခဲကြရတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူဌေးကျောင်းကြီးတွေကို မဆိုလိုပါဘူး ကျောင်းအစ်မရယ်။ အဲဒီအခက်အခဲအတွက် အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာကြီးတစ်ဦးက အကြံပေးပါတယ်။
ကျောင်းဖွင့်စ ကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရိတ်လှူဒါန်းတဲ့ အခမ်းအနားလေးတွေ လုပ်ကြရင် ဘယ်လိုနေမလဲ ပေါ့ဗျာ။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ငွေတောင်းနေတာထက်စာရင် တရားဝင် စာရင်းနဲ့ အင်းနဲ့ အလှူငွေလက်ခံတဲ့ သဘောပေါ့။ မဆိုးဘူးဗျ။ အဲဒါလေး စဉ်းစားသင့်တယ်။ တရားဝင် စာရင်းတွေအင်းတွေနဲ့ လက်ခံတာမျိုးဆိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံ အလွဲသုံးစားလည်း လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ အခုလိုကျပြန်တော့လည်း ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေ ဘ၀က ကျဉ်းထဲ ကျပ်ထဲ ဗျ နော့။ ကျောင်းကြီးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ စရိတ်ကို အစိုးရကလည်း ထုတ်မပေး။ စရိတ်လိုလို့ ကျောင်းသားမိဘတွေဆီက အလှူခံပြန်ရင်လည်း အရေးယူခံရ။ သနားစရာတောင် ကောင်းနေသေး ဟေးဟေး။ အော် … မသနားသင့်တာကို သွားသနားနေမိပြန်ပါပြီ။ အနေအထိုင်က မတတ်တာ အဲဒီလို…။
ငွေကောက်တဲ့ ကျောင်းအုပ်တချို့ကို စစ်တုရင် ကစားနည်းထဲက နယ်ရုပ်ကလေးတွေ ချကျွေးသလိုမျိုး အရေးယူ နေရုံနဲ့တော့ ဒီ ကျောင်းဖွင့်ချိန် အလှူခံတဲ့ ပြသနာကြီးက ပြေလည်မသွားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ လည်း ကျောင်းဖွင့်ချိန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ စရိတ်စကတွေအတွက် ဘတ်ဂျက်လေး ချပေးတာမျိုး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဘတ်ဂျက် မရှိပဲ ဘာနဲ့ သွားပြင်ဆင်ကြမလဲဗျာ။ အဲဒါနဲ့ ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကြီး ဖြစ်လာတာပါပဲ ကျောင်းအစ်မရေ။ စဉ်းစားကြဖို့ပါ။
အိမ်သာအကြောင်းရေးကြတဲ့ မပဒုမ္မာနဲ့ အီးတုန်းတို့ကိုတောင် သတိရမိပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှ ကျောင်းအိမ်သာများဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်လောက်တော့ အီးတုန်း ကိုရေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ချင်ပါတယ် ကျောင်းအစ်မရေ။
ဟုတ်တယ်ဗျာ။ အဲဒီအိမ်သာ ဆိုတာကြီးကလည်း တော်တော် အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေတာကြီးဗျ။ မရိုသေ့ စကားဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ အိမ်သာမကြိုက်ရင် ဖြစ်ညှစ် ချုပ်တည်းပြီး အိမ်ရောက်အောင် ပြန်တတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ အိမ်သာ ကလည်း ပါချင်စဖွယ် ပေါက်ချင်စဖွယ် အိမ်သာဖြစ်ဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အိမ်သာ တစ်ခုဖြစ်ဖို့ လိုမှာပေါ့။ မိဘတွေကတော့ ကလေး ကျောင်းသွားရင် အိမ်သာ အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ မေးချင်မှ မေးကြမှာပါ။ အမှန်တော့ မေးသင့်ပါတယ်။ အိမ်သာတွေက ကလေးတွေအတွက် အဆင်မပြေ နိုင်ဘူးဆိုရင် ကျောင်း ကို စောဒက တက်သင့်ပါတယ်။ တစ်ခါများ အိမ်သာထဲ ကလေး လေး တစ်ယောက် ပိတ်ရက်ကြီး ကျန်နေခဲ့လို့ အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့ ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ အိမ်သာကို သိတ်ပေ့ါပေ့ါဆဆ မတွက်ထားသင့်ဘူးဆိုတာလေး ပြောချင်တာပါ။ မနေ့က ၂၈-၅-၂၀၁၂ ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာပါ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲက ကျောင်းအိမ်သာ ကိစ္စလေး နည်းနည်း ကူးချလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီ နာမည်ကြီးကျောင်းလေ။ တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေ ကလေးတွေရဲ့ အိမ်သာထဲထိ နေ့စဉ်စစ်ဆေးပေးဖို့ အော်သံထည့်လိုက်ချင်တာ တကယ်ကိုပဲ။ ကလေးက တော်ရုံဆို ကြမ်းခင်းမှာ ရေတွေအပြည့်ရှိတာမို့ ချော်လဲမယ်ဆိုပြီး ဆီးချုပ်၊ ၀မ်းချုပ်ခံပြီး ကျောင်းမှာ အိမ်သာမ၀င်ဘူး။ တစ်ခါ နှစ်ခါလောက်ကတော့ မဖြစ်မနေ ၀င်ခဲ့ရတော့ အမလေး ကလေးဘောင်းဘီ အောက်နားတွေမှာ ရေတွေစိုရွှဲနေတာပဲ။ တစ်ခါကတော့ အိမ်သာထဲအ၀င်မှာ ချော်လဲလာတာမို့ အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး စိုရွှဲနေတာပေါ့။ အဲဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းအိမ်သာ သန့်ရှင်းရေးတွေရှိပေမယ့် ကောင်းကောင်းလုပ်မထားတောကြောင့် ကလေးတွေ စိတ်ညစ်ရတယ်။ ဒါတွေကိုပါ ပြင်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ မနက်ပိုင်းတစ်ကြိမ် ညနေပိုင်းတစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးဝင်လုပ်ထားရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ကျောင်းအိမ်သာ သန့်ရှင်းရေးအတွက် ပိုက်ဆံကောက်ရင်လည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိမ်သာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းသုံးတတ်အောင် ကျောင်းကနေစပြီးသင်ပေးလိုက်မှ ရတော့မယ်ထင်တယ်။ မြန်မာတွေက လိုမှပဲ အိမ်သာကို သတိရကြတယ်။ နိစ္စဓူဝ မကင်းနိုင်တာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ဆိုင်တာမို့ အိမ်သာသုံးစွဲတာ၊ အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးဟာ အရေးကြီးတာကို ကျောင်းတွေမှာ စာတွေ့လည်းသင် လက်တွေ့လည်းပြပေးသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်
လို့ ကျောင်းသားမိခင်တစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်တဲ့။
အိမ်သာ ကိစ္စကို ပေ့ါပေါ့တန်တန် သဘောမထားလိုက်ကြဖို့ပါ။ စဉ်းစားကြဖို့ပါဗျာ။
အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ အလှူ
ဒီပညာရေးရာသီသစ်မှာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ကလည်း ကျောင်းနေရန် အခက်အခဲရှိကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေကို ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းကြဦးမယ်ဆိုတဲ့ မင်္ဂလာ သတင်းစကားလေးလည်း ကြားရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေထဲက The Gardeners Group (ဥယာဉ်မှူးများ) အဖွဲ့ အကြောင်းလေး နည်းနည်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ကျောင်းအစ်မရေ။
ဥယျဉ်မှူးများအဖွဲ့ဟာ ပညာရေးမြှင့်တင်လိုသော စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ၊ ၀ါသနာတူ စေတနာရှင်များ စုစည်းထားသော အဖွဲ့လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် တစ်နှစ်စာ ပညာသင်စရိတ်ကို ၅၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး လစဉ်အလှူငွေကို ၁၅၀၀ ကျပ်နှုန်း ကောက်ခံကြောင်းသိရပါတယ်။ ကျောင်းထားပေးသည့် စေတနာရှင်များအတွက် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်မှာ ကိုယ်ကျောင်းထားပေးသည့် ကျောင်းသားလေး၏ ဓါတ်ပုံကို ဖေါ်ပြပေးပါတယ်တဲ့။ ကလေးများထဲတွင် ကိုရင်ငယ်လေးများ၊ တောင်ပေါ်ဒေသမှ တိုင်းရင်းသားလေးများ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ မှ ကလေးငယ်များနှင့် မိဘမဲ့ ကလေးများပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့ အဖွဲ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းထားပေးလိုက်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဘွဲ့ရချင်မှ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေးတန်းနဲ့ ကျောင်းထွက်ရမယ့်ကလေး ငါးတန်းရောက်သွားမယ်။ ရှစ်တန်းနဲ့ ကျောင်းထွက်မယ့် ကလေး ကိုးတန်းတက်စေနိုင်တယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အကြံဥာဏ်၊ ငွေအား၊ လူအားတွေကို မျှော်လင့်နေပါရစေ
တဲ့။ ဥယျာဉ်မှူးများအဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုသန်းနိုင်ဦးက
“ မန္တလေးမှာပဲ လုပ်နိုင်သေးတယ်။ ရန်ကုန်အထိလက်လှမ်းမမီသေးဘူး။ မန္တလေးမြို့ခံမဟုတ်တဲ့ ရပ်ဝေးကမိတ်ဆွေတွေကလည်း ကိုယ့်အနီးအနားက နွမ်းပါးတဲ့ ကျောင်းလေးတွေမှာ စုပေါင်းလှူဒါန်းကြစေချင်ပါတယ်”
ဥယျာဉ်မှူးများအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ချင်ရင် ဖုန်းနံပတ် ၀၉၂၀ ၁၄၄၄၁ ကနေ ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ်တဲ့။ သီးသန့် အလှူဒါနပြုလုပ်လိုပါက မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၅၅လမ်းတွင် ရှိသော မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ကံတက်ကုန်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ဗျာ။ အော် မန္တလေးသားတွေရဲ့ စေတနာတွေပေါ့ခင်ဗျာ။ သာဓု ခေါ်ရအောင်ပါ။ သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဥယျာဉ်မှူးများအဖွဲ့သားများခင်ဗျား။
ထူးခြားတာက ကျွန်တော်တို့ ရွာသား ကိုထွန်းဝင်းလတ်ကလည်း အဲဒီလို ပညာရေးလှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ကျောင်းအစ်မရေ။ တတ်နိုင်လို့ လှူချင်တန်းချင်ကြရင် ကိုထွန်းဝင်းလတ် ကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်း အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မိန့်ခွန်း
ကျောင်းတွေဖွင့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လှိုင်မြို့နယ် NLD ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲမိန့်ခွန်းမှာ ဒီလိုထည့်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့ဗျာ။
အခုဆိုရင် ကျောင်းတွေဖွင့်တော့မယ်နော်။ ကျောင်းဖွင့်ရင် အလှူငွေကောက်မယ်။ အဲဒီလို အလှူငွေကောက်ရင် ကျောင်းသွားအပ်တဲ့မိဘတွေ ဘာလုပ်မလဲ။ အမှန်ကမေးရမှာလေ။ ဘာအတွက်အလှူငွေကောက်တာလဲ။ ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ။ မိဘတွေက မေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်။ အဲဒီလိုမမေးဘဲနဲ့ ပေးခဲ့ကြလို့ ပညာရေးအခြေအနေတွေက အခုလို ဖြစ်နေတာပါပဲ။
တဲ့။ တောင်းတိုင်းပေးရတဲ့ခေတ်ကြီးတော့ နိဂုဏ်းချုပ်တော့မယ့် သဘောပဲဗျာ။
ကျောင်းအပ်ချိန်မှာ ငွေကြေးအမြောက်အများပေးရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ နာမည်ကြီးအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတစ်ဦးရဲ့ စကားလေးလည်း ဖတ်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အမြင်မှာတော့ ကျောင်းမှာ လျှောက်လွှာတင်ကတည်းက ပယ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ အကုန်လက်ခံပေးပါတယ်။ ကြားတန်းတွေမှာတော့ ကိုယ့်ဆီက တက်တဲ့ ကလေးရှိနေတဲ့အတွက် နယ်ပြောင်း၊ တပ်ပြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာပြောင်းရွှေ့တာတွေကို ဦးစားပေးတာပေါ့နော်။ တကယ်တော့ ပြောနေကြတာပါ။ အခုက ကောလဟာလကြောင့် ပိုက်ဆံမရှိရင် ဒီကျောင်းတွေမှာ မတက်နိုင်တော့သလို ဖြစ်နေတယ်
ဟုတ်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ ခင်ဗျာ။ ဆရာမကြီးစကားကို ကျွန်တော်တို့ကလည်း တကယ်ကို ယုံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
တကယ်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲ မ၀ံ့မရဲ မျှော်လင့်နေမိပါတယ် ကျောင်းအစ်မရေ။
ကျောင်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျောင်းတွေရှေ့မှာ ကျောင်းကားတွေ ခြေရှုပ်နေကြတာ တွေ့မှာပေါ့ ကျောင်းအစ်မရေ။
ကိုယ့်သားလေး သမီးလေးတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်ကားကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ကျောင်းကြိုပို့ လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ကျောင်းအစ်မရယ်။ အဲ…အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ကျောင်းကားတွေကို အားကိုးကြရတော့တာပဲပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ကလေး စီးမယ့်ကျောင်းကားကိုလည်း ဈေးသက်သာရုံ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးရုံနဲ့ မအပ်သင့်ဘူးခင်ဗျ။ မောင်းမယ့်ယာဉ်မောင်းရဲ့ လိုင်စင်အဆင့်လေးဘာလေးတော့လည်း မေးမြန်းကြည့်ကြသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ယာဉ်နောက်လိုက် ပါမပါ။ ဒါလည်း မေးသင့်တဲ့ ကိစ္စပေပဲဗျာ။ သင့်တော်မယ့်ကျောင်းကားကို ရွေးခြယ်နိုင်စေဖို့ ကျောင်းကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြောထားဆိုထားကြတာလေးတွေ ရှာဖွေ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းကျောင်းများတွင် ပြေးဆွဲနေသော ပုဂ္ဂလိကကျောင်းကား များတွင် မောင်းနှင်လျက်ရှိကြသော ယာဉ်မောင်းများသည် (ခ) လိုင်စင်အဆင့်သာရှိ ယာဉ်မောင်းများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါ ကြိုပို့ယာဉ်မောင်းများတွင် လိုက်ပါသူ ကလေးများ ယာဉ်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု အခြေအနေသည် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာသည့်အတွက် ကြို/ပို့ကျောင်းကားမောင်းနှင်သူများအား ကြပ်မတ်ရန် လိုအပ်လာကြောင်း
မထသ(ဗဟို) ဥက္ကဌ ဦးလှမြင့်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းကားအနေနဲ့ ကျောင်းတော်တော်များများမှာ အသုံးပြုလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းကားတွေကို အခုလို သီးသန့်ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် မိဘတွေကိုယ့်ဘာသာ ကြို/ပို့ လုပ်တာထက် လိုင်းကားတွေကို တွယ်စီးရတာတို့ထက်ပိုပြီး ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေတာ မှန်ပေမယ့်
ကျွမ်းကျင်လိုင်စင်အဆင့် (ဃ) ရှိတဲ့သူ မောင်းနှင်သင့်ပါတယ်။ လက်ရှိကျောင်းကားမောင်းနှင်သူတွေမှာ လိုင်စင်အဆင့် မပြည့်မီတာတွေတွေ့နေရပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှု ဗဟိုကော်မတီက ကြပ်မတ်မှုတွေလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်
လို့ လည်း ပြောကြားသွားပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ။
ကျောင်းကား ကြို/ပို့ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ ယာဉ်မောင်း ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တယ် ဆိုတာကတော့ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါတစ်ခုတည်း နဲ့တင် မဟုတ်ဘဲ ယာဉ်နောက်လိုက်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုရယ်၊ ကျောင်းသားမိဘတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။
ကျောင်းကြို/ပို့လုပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အချိန်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာပါ။ ကျောင်းသားမိဘတွေဘက်က အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းမနေဘဲ
ကျောင်းကားဘက်က ပြန်စောင့်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး အများနဲ့လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းချိန်အမီ ပြန်မောင်းပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ အမြန်မောင်းနှင်မှုတွေ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်
လို့ ဒဂုံ (၁) ကြို/ပို့ ကျောင်းကားပြေးဆွဲနေသူ ဦးထိန်လင်းက ဆိုပါတယ်တဲ့။
ကလေးဗဟိုပြု သင်ကြားရေး စံနစ်
ဒီပညာရေးနှစ်ထဲမှာ ကလေးဗဟိုပြု သင်ကြားရေးစံနစ် ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ အခြေခံပညာ ဆရာဆရာမများသို့ သင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေပါတယ်တဲ့ ကျောင်းအစ်မရေ။
သင်ကြားမှုစံနစ်တွေ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်လာမလဲ။ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ ကျောင်းအစ်မရယ်။
မြန်မာပြည် ပညာရေး ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးနဲ့ ဒီပို့စ် ကို နိဂုဏ်းချုပ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ။
၀န်ခံချက် – ဒီပို့စ်လေးက မတ်လ ဧပြီလ နဲ့ မေလတွေမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေ သတင်းစာတွေထဲက ပညာရေးသတင်းလေးတွေကို
ကိုးကားပြီးရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာလေးပါ။
နက်ဖန်ဘဲ ကျုပ်သားက်ို ဘဘလက်ဆီ ပို့လိုက်တော့မယ်
အမှန်အတိုင်းပြောရင် လင်မယား၂ယောက်စလုံး အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ ထမင်းနပ်မှန်ဖို့ပြေးလွှားနေကြရတာဆိုတော့.. ကျောင်းအပ်ဖို့သာ သိတာ။ ကျန်တာ ဘာမှ နားမလည်ခဲ့ဘူးရယ်
သားတို့ဗမာပြည်ကြီးမှာက အစိုးရအလုပ်ဆိုတာနဲ့ ရာထူးဆိုတာကဒကဏ္ဍပေါ့ဗျာ
အောက်ဆိုက်ကောင်းလား ဂွင်တည့်လား ဒါကိုအခြေခံကြတာကလား
ဥပမာဗျာ ကူဘိုတာ 5/6 အင်္ဂျင်သားသားလေးကို ရေတင်ရေချဘို့မောင်းတဲ့ ဝန်ထမ်းကတောင်
အင်္ဂျင်ဝိုင်လေး ဒီဇယ်လေး အောက်ဆိုဒ်ထုတ်ကြသေးတာ
မော်တော်ကားကနေ ဘကြီး FR တို့လို သဘောင်္ာကပ္ပတိန်တွေထိ ဝန်ထမ်းတွေဆို ဘယ်လိုအောက်ဆိုဒ်
ဆိုလိုတာက ကျောင်းဆရာ ဆြာမတွေလည်း ဝန်ထမ်းတွေဘဲဂလားနော ( ဒီလို အုပ်စုဖွဲ့ပြတာ )
ဒီတော့ သူလည်းဝန်ထမ်းဘဲဆိုတော့ကာ သူ့မှာက အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ ဒီဇယ်မရှိတော့
တစ်ခုတော့အတိုက်ခံလုပ်လိုက်အုန်းမှ ဆြာ နဲ့ ဆာမတွေကိုပြောကြတဲ့လက္ခံရခက်ခက်မခက်
အဲ့ဒါကိုပြောရရင်တော့ အာစရိယဂုဏော ဆိုပြီး ဆြာ ဆြာမတွေကို ကျေးဇူးရှင်ဖက်အုပ်စုဖက်ပို့လိုက်တော့
ဆြာ ဆြာမတွေက နေရင်းထိုင်ရင်း မေတ္တာတွေ စေတနာတွေ ဘာညာကွိကွတွေ ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေ
အိုက်ခါကျ စေတနာမတ္တာမရှိရင် ဆြာ ဆြာမ ဖြစ်ဘို့ခက်လာပြန်ပြီ ပြောကြပြီ
ဒီတော့ကာ သူ့ဖာသာ အစိုးရလခစားတာလည်း တစ်မျိုးပေါ့ အလှူငွေဆိုပြီးဝါးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်
ဆိုခဲ့ပြီးသလို သူ့အလုပ်က ဓာတ်ဆီမရ ဒီဇယ်မရဆိုတော့ သူ့ကို အကြံဖန်မလုပ်စေခြင်ရင်လည်း
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်း အာစရိရဂုဏောတွေကို နည်းနည်းပါးပါး
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အခြေနေအရ ဆြာ ဆြာမတွေအတွက် နည်းနည်းကြိုကန်ပေးလိုက်ဒါဘာ
ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမှီ ကျောင်းတွေအကြောင်း တစေ့တစောင်း တင်ပြပေးတဲ့..
ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကျောင်းနေရမဲ့ အရွယ်ကို လွန်လာခဲ့ပေမဲ့..
ကျောင်းတော်ကြီးတွေကိုတော့. ဖြူစင် .ရိုးသားသော ရပ်ဝန်းတခုဖြစ်စေချင်တာ အမှန်ပါဗျာ..
လူကြီးမင်းများ ပြောနေကြ ဘက်စုံကောင်းမွန်သော..ပညာရေးစနစ်ကို.မဖန်တီးနိုင်သေးတောင်..
လက်တွေ့အကျိုးရှိမဲ့ အခြေခံကျကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတော့
၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်မှာ မြင်ရမယ် လို့မျှော်လင့်ကြတာပေါ့ ဗျာ..
ရှင်ပြောတာကို ကျမ ဆရာမတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ
ထောက်ခံပါတယ်။ Slogan အရ တပည့်မရှားတစ်ပြားမရှိ ပီတိကိုစားအားရှိ ဘာညာ
ရိုက်ထည့်ထားတော့ ကျမတို့ ဆရာ/မ ဆိုတာ အော်တိုမက်တစ် အစာမစားတတ်သူတွေ
ပီတိဆိုတဲ့ အရာကပဲ Centrum အားဆေးကဲ့သို့ ရာသက်ပန်စွမ်းနေသလိုလို။
တကယ်တော့ ပီတိချည်းမရတာ Common Sense ရှိသူတိုင်းသိတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကိုပုပြောသလို( ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်း အာစရိရဂုဏောတွေကို
နည်းနည်းပါးပါးရေလေးဘာလေး လစဉ်ကြေး သဘောလေးထောက်ပံ့ပေးသင့်ပါကြောင်း)
ကိုတော့ လက်မခံချင်ပါ။လခတိုးရင်ရပါပြီ။ကလေးတွေကလည်း တစ်နှစ်တစ်ခါ အာစရိယ
ပူဇော်ပွဲလုပ်ပြီး သုံးလေးငါးသောင်း ဖိုးဆိုသလို ကန်တော့တာတော်ပါပြီကွာ။
အနာဂတ်ခလေးတွေ သက်တောင့်သက်သာ ပညာသင်နိုင်မှ တစ်ချိန်မှာ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံကြီး ကမ္ဘာ့အလယ် တင့်နိုင်မှာ
ကျုပ်ဆို အသပြာမတတ်နိုင်လို့ပညာကောင်းကောင်းမတတ်ခဲ့ဘူး
လူလေးက တော်ချင်ရက်နဲ့စာရိတ္တလေးက ဖျက်နေတာပေါ့ဗျာ.
အဲတာကြောင့်. ခုချိန်အခါမှာ ကျုပ်လို ငတုံးတစ်ကောင်ရှိနေတဲ့အတွက် ရွာ၊ မြို့ နယ်၊တိုင်း၊နိုင်ငံကြီး တစ်ဒေါင့်တစ်နေရာ နစ်နာခဲ့ရသပေါ့ဗျာ
ဘီအီးအေးအေးလေးနဲ့စိတ်ဖြေပါရစေဦး ဆရာတို့ ရယ်..
ထောင်လို့ ရတာ အကုန်ထောင့်ခဲ့ပါတယ်နော.
ခါတော်မှီပို့စ်လေးအတွက် Bravo! ဘဘ ဘလက်
လက်မခပ်ထွားထွားကြီး တချောင်းထောင်ရင်း ..
အားပေးသွားပါတယ် ဘဘဘလက် ..
အင်း … ရန်ကုန်မှာတော့..
ကျောင်းပို့ကြို ကားတွေနဲ့ လမ်း ပိုကျပ်လာဦးပေမပေါ့ …
ပညာရေးစနစ်ကြီး ပြန်လည်မွမ်းမံပေမယ့် …
သင်ယူမယ့် ကလေးတွေ နည်းနေရင်လည်း အလုပ်မဖြစ်ပြန်ဘူးဗျ…
ဒီမိုခေတ်ကြီးမှာ ဒီမိုဘေဘီလေးတွေ ဘွမ်းန်း ကြဖို့တော့ လိုနေပါပြီဗျာ..
ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူဂျီး ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိသေးရဲ့မဟုတ်လား..
လူကြီးဖြစ်တဲ့အခါ လူတော်လူကောင်း (ပြောင်းပြန်မလှန်ရ) လေးတွေ
ဖြစ်လာဖို့ အခါအခွင့်သင့်တုန်း …
ကဲ အာပျိုဂျီးတို့ရေ …
ခွင့်သာခိုက်မှာ မလိုက်ချင်လျင် အမိုက်နင့်ပြင် ရှိသေးလေလိမ့်လား
တဲ့ …။ (ကဗျာ ရွတ်သွားပါတယ်…) ဟီး…
ကျုပ်ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက ကိုယ့်ကျောင်းကိုယ်ဆောက်ပြီး(ကိုယ့်မိဘဆောက်ပြီး) ကျောင်းတက်ခဲ့ရတာပါ။
ကျုပ်ကိုကျောင်း စ အပ်တဲ့ နှစ်ကတွက်ရင် အခုကို အနှစ်လေးဆယ်ရှိပြီ
ပြီးတော့ ကျောင်းကို လာလည် လာစစ် လာကြည့် တဲ့ မည်သူကိုမဆို(ခွေးရော ပွေးရော)
ကိုယ့်ကျောင်းရံပုံငွေနဲ့ ဧည့်ခံရတုန်း..။ ကိုယ့်ကျောင်းရံပုံငွေနဲ့ လက်ဆောင်ထည့်ပေးပြီး
ရေဗူးပေါက်လို့ ရေလဲပါအောင် အ၀သောက်လာခဲ့လိမ့်မယ် လို့ ပြောချင်ပါကြောင်း….။
(ဒါက ကိုဘလက်ပိုစ့်မို့ ကီးလျှော့ထားတာနော….ကျုပ်အိုသွားပြီမထင်နဲ့.. :p)
ဒီ မနက် ပဲ ကလေးတွေ ကျောင်းအပ်ခဲ့ပြီ
စာအုပ်တွေလဲ ထုတ်ပေးတယ် တပြားမှ မကောက်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့ ဆရာမ နဲ့ စကားပြောရင်း မတိုင်ဘူး ထင်လို့ အလှူခံဦးမယ် ကျောင်းဖွင့်ရင် အမှိုက်ပုံးလေး ၊ လိုတာလေးတွေ လှူပါဦးတဲ့
တကယ်ဆို ဆရာမတွေရဲ့ တာဝန်က ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ ပညာရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ………ဆိုတာတွေကို သင်ပေးရမှာ စံနမှုနာပြနေရမှာ အခုတော့ လုံလောက်တဲ့ ဘက်ဂျက် ချမပေးနိုင်တော့
ဆရာမတွေမှာ အလှူခံတဲ့ အလုပ်ကိုပါ ( မလုပ်ချင်ပဲ ) လုပ်နေရတယ်
အခုချိန်မှာတော့ ဘက်ဂျက်တွေနဲလို့ဆိုပြီး မိဘတွေ ဆရာမတွေ ကျောင်းသားတွေ စာအုပ်တွေ ကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြမနေတော့ပါဘူး ( တိုင်းပြည်တိုးတက်လာရင်တော့ တနှစ်ထက် တနှစ် လုံလောက်တဲ့ ဘက်ဂျက် ချပေးမယ်လို့တော့ ယုံကြည်ပါတယ်)
ကျွန်တော်တို့လို မိဘတွေဘက်ကလဲ နိုင်တဲ့ တာဝန်လေးတွေ ကို လိုလိုလားလားနဲ့ ထမ်းချင်ပါတယ်
နိုင်တာထက် ပိုထမ်းခိုင်းတာမျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ၊ နောက် ကလေးရဲ့ လိုအပ်ချက် ဆရာမရဲ့ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ကျူရှင်သင်ကြတာကိုလဲ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး သင်ချင်တဲ့ ကလေးကို သင်ပေးပါ
ဒါပေမဲ့ မတက်တဲ့ ကလေးကို နှိပ်ကွပ်တာမျိုး ဆရာ မပီသတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေတော့ ရှောင်ပေးကြပါ
ဒါဆို ကျောင်းသား ဆရာ မိဘ အားလုံး အဆင်ပြေကြမယ် ထင်ပါတယ်
ကျောင်းကားကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြားဖူးတာလေး တစ်ခု ပါ ကျောင်းကား နောက်လိုက်တဲ့ လူငယ်အမျိုးသားလေးတွေက ကျောင်းသူလေးတွေ ( အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်လေးတွေ ) အပေါ် မတော်တဲ့ အပြုအမှုလေးတွေ လုပ်တာမျိုး ရှိတယ် ဆိုတာပါ ၊ အဲဒါကြောင့် မိဘတွေက ငါ ကတော့ ပိုက်ဆံ ရှာပေးပြီး ပြီ လုံလောက်အောင် ထားတာပဲ ဆိုတာမျိုး ပစ်မထားပဲ
သွားတာ လာတာ အပေါင်းအသင်း နောက် ကိုချော ပြောတဲ့ ကျောင်းအိမ်သာကစ ဂရုစိုက်ပြီး မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးလေး တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်
ဥယျာဉ်မှူးများ အဖွဲ့ကို တည်ထောင်သူများ ကူညီသူများ အားလုံး ကို ကြယ်ငါးကောက်သူများအနေနဲ့ လေးစားကြောင်း အားကျကြောင်း တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ပြောချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ကိုချောလဲ ရန်ကုန်မှာ အဲဒီအဖွဲ့မျိုးလေး တည်ထောင် ကူညီပေးပါလား
လုပ်ဖြစ်ရင် တတ်နိုင်တာ အားလုံး ကူညီပါဝင်ချင်ပါတယ်
လက်မအကြီးကြီးတော့မရှိပေမယ့်… ရှိစုမဲ့စု လက်မပိစိညှောင့်တောင့်လေးသုံးပြီး လက်မထောင်သွားပါတယ်နော် ။
မရှိမရှားလူတန်းစားတွေနဲ့ လူကုန်ထံတွေသာ ပညာသင်ခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ထားတတ်ကြတာပါ။ ပညာသင်ပေးတာနဲ့အတူ ကလေးကိုလည်း ကြီးကြီးမားမားဘ၀ရပ်တည်ချက် ရစေချင်ကြတယ် ။ အခြေခံ လူတန်းစား လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားတွေကတော့ ပညာသင်တယ်ဆိုတာ ရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ရုံလောက်ပဲ မျှော်လင့်ထားကြတယ် ။ ဒီထက်ပိုပြီး အများကြီး မမျှော်လင့်ပဲ အတတ်ပညာတစ်ခုခုသာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် သင်စေချင်ကြတယ် ။ (ချြွင်းချက် ။ ။ ဆင်းရဲပြီး ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ မိဘမျိုးလည်း ရှိပါတယ်နော်)
ပညာသင်ချင်ရဲ့သားနဲ့ ကျောင်းလခ ၊ စာအုပ်ဖိုး ၊ အ၀တ်စားဖိုး မတတ်နိုင်လို့ ကျောင်းမတတ်ရရှာတဲ့ မိသားစုတွေ ၊ ကလေးတွေ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိကြတယ် ။ ဒါ့ပြင် တခြားကလေးတွေနဲ့ တန်းတူ ၊ မစားရ မ၀တ်ရလို့မျက်နှာငယ်မှာ စိုးတာနဲ့ ကျောင်းမထားတဲ့ မိဘတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ … အခုဆိုလျှင် အခမဲ့ပညာရေးပေါ်လာတာ အလွန်ကြိုဆိုဖို့ကောင်းပါတယ် ၊ ၀မ်းသာစရာလည်းကောင်းပါတယ် ၊ ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်နေတဲ့ အနေထားပါ ၊ နောက်ဆို စာအုပ်တွေတင်မကပဲ ၊ ကျောင်းသာ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရယ် ၊ ကျောင်းသားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရယ်ကိုပါ ပေးဝေနိုင်မယ်ဆိုလျှင်စာသင်ကြားနိုင်မယ့် အခွင့်ရေးရှိသူ ကလေးတွေ ပိုများလာမလားပဲ … ။ အခုနောက်ပိုင်း အစိုးရကျောင်းတွေမှာ ပညာမသင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို တဖက်တလမ်းက ကူညီနေတဲ့ ဘက ကျောင်းတွေ ပေါ်လာနေပြီတဲ့လေ … ။ စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာက ဘကကျောင်းက ဆရာ/မတွေ မွန်း မံသင်တန်းလိုမျိုးတွေ သွားတတ်တဲ့အခါ သင်ရိုးညွှန်းတန်းစာအုပ် ၊ အစိုးရကျောင်းက ဆရာမတွေလို တစ်ယောက်တစ်အုပ်ကျ မရတာပါပဲ ။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့ စနစ်ဟာလည်း အလွန်ကောင်းတဲ့ စနစ်ပါ ။ လူကလည်း ထူးချွန်ပါလျှက် စရိတ်စကကြောင့် ပညာသင်ခွင့် မရသူတွေအတွက်တော့ အားကိုးရာပါပဲ … ဒါပေမယ့်လေ … စိတ်ပူမိတာက .. ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရွေးချယ်တဲ့ စနစ် မှန်ကန်မှု ရှိစေဖို့ ပါ … တကယ်လိုအပ်ပြီး တကယ်တော်တဲ့ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်သင့်တာ … ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်တာမျိုးတော့ မလုပ်သင့် မလုပ်အပ်ပါဘူး ။
အရင်ကတော့ ကျောင်းအပ်လက်ခံလျှင် အလှူငွေဆိုတာမျိုးတွဲကောက်ကျတယ် … ။ ဒါကလည်း ..ကျောင်းရဲ့ အထွေထွေစရိတ်နဲ့ ဖန်အတွက်ပေါ့လေ ။ အဲ့လိုမှမကောက်လျှင် ကျောင်းနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ လုပ်စရာရှိတဲ့အခါ … ကျောင်းအုပ်ကပဲ အိတ်ထဲက စိုက်ရမလိုလို ၊ တာဝန်ကျဆရာတွေကပဲ စိုက်ရမလိုလိုပေါ့ ။ အစိုးရဘက်ကသာ ကျောင်းတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ အထွေထွေစရိတ်မျိုး၊ အသုံးဆောင်မျိုး ပံ့ပိုးပေးလျှင် ဒါတွေကောက်ဖို့ လိုကို မလိုတာပါ ။ (အလှူငွေကောက်ပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက်သုံးနေသော ကျောင်းအုပ်များမပါဝင်ပါ ) ။ ဒါကြောင့်လည်း ဆရာ/မတွေ အလှူငွေလို့ကောက်တယ်ထင်ပါတယ် … ။ အလှူငွေကောက်တာ လက်ခံပေမယ့် … ဘယ်လောက်ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ငွေပမာဏကို ပုံသေလုပ်ထားတာတော့ သဘောမကျပါဘူး ။ တတ်နိုင်တဲ့ မိဘရှိသလို မတတ်နိုင်တဲ့လူလည်း ရှိပါလိမ့်မယ် သဒ္ဓါသလောက်ပဲ ကောက်ခံသင့်တာမျိုးပါ …. ဒီလိုပါပဲ ကျောင်းတွေကို လာပြီး လိုအပ်တာများကို မှာစားပါသည် ဆိုတဲ လူမျိုးထက် ၊ တကယ့် လက်တွေ့ အခြေနေကို အယောင်ဆောင်တွေမပါပဲ နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကွင်းဆင်းလေ့လာမယ့် လူမျိုး တကယ်လိုအပ်ပါတယ် ။ ရှိလည်း ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
ကျောင်းကျန်းမာရေး ၊ သန့် ရှင်းရေးတွေမှာ အရေးပါတဲ့ အိမ်သာကိစ္စကို …ကျောင်းအတော်များများ မေ့လျော့ထားခဲ့ကြတယ် ။ မဖြစ်မနေ အိမ်သာဝင်ရပေမယ့် မနှစ်မြို့တဲ့ အခြေနေမျိုးကို ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ဘူး ကျွန်မကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ကျောင်းတိုင်းမှာ သန့် ရှင်းရေးရှိပေမယ့် ကျောင်းအုပ် အခန်းနဲ့ မြင်သာ ထင်သာတဲ့ ကျောင်းရှေ့ မျက်နှာစာလောက်သာ အဓိကထား ဦးစားပေးသန့် ရှင်းရေးလုပ်ကြတာပါ ။ ကျောင်းခန်းတွင်းသန့်ရှင်းရေးတောင် အနီ၊အပြာ၊အ၀ါ၊အစိမ်းတွေခွဲပြီး ကျောင်းသူ/သားတွေက တာဝန်ယူရတာ … ။ ဆရာဆရာမတွေရဲ့ အိမ်သာနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ အိမ်သာ တန်းတူမဟုတ်လို့ ဆရာမတွေလည်း အိမ်သာက အခြေနေကိုမသိပါဘူး ..ဒီတော့သန့် ရှင်းရေးတွေ လစ်ချင်တိုင်းလစ်ဖို့ အခွင့်ရေးရသွားပြီပေါ့ ။ လူမြင်တဲ့နေရာတွေပဲ လုပ်ပြီး လူမမြင်တဲ့နေရာတွေဆို သန့် ရှင်းရေးမလုပ်ပဲနေလို့ရ ၊ ခိုကပ်လို့ ရပြီ ။
ငယ်ငယ်ကအတွေ့ ကြုံအရ အိမ်သာဆိုတာမျိုးက ဆိတ်ငြိမ်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ခြောက်လှန့် တတ်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့(မူလတန်းအရွယ်)။ ဒီကြားထဲ ရေမပိတ်ပဲထားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေရှိလို့ အိမ်သာရေဘုံပိုင်က ဒလဟောစီးရင်း အပြင်တွေပါ စီးထွက်နေတာမျိုး …ကြောက်အား လန့်အားနဲ့ပြေးလျှင် သန့်ရှင်းမှုအားနည်းပြီး ရေညှိတက်နေလို့ .. ဗိုင်းခနဲလဲနိုင်တဲ့နေရာမျိုး ကလေးအရွယ်မှာ ကိုယ့်အညစ်ကြေးကိုယ်မရှင်းတတ်သေးတဲ့အရွယ် ၊ မရှင်းတတ်ရှင်းတတ်နဲ့ ရှင်းလည်း မစင်ကြယ် ၊ ဒါ့ပြင် သန့်ရှင်းရေးကလည်း ၀င်မရှင်းတော့ … အိမ်သာဆိုတဲ့နေရာက ရွံ့ မုန်းကြီးကို ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ … ။
ဆရာ ၊ဆရာမတွေလည်း စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တွေခွဲပြီး ကျောင်းကျန်းမာရေးအတွက် မုန့်ဈေးတန်းတင်မကပဲ ၊ အိမ်သာကိုပါ စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
အစိုးရမဟုတ်ပဲ တခြားအဖွဲ့စည်းတွေက လှူတာမျိုးကလည်း အလွန်ကောင်းတဲ့အလေ့ကျင့် လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ ။ ဒီလို လုပ်နေသူတွေကို ချီးကျူးလေးစားမိပါတယ် ။
နာမည်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းဝင်ကြေးကိစ္စ ယခုထိရှိပါသေးတယ် … ။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကလည်း လူကုန်ထံ မိဘတွေကြောင့်လို့ ကျွန်မတော့မြင်မိပါတယ် ။ ကျောင်းအုပ်ကလည်း သူ့ဂွင်ထဲရောက်လာတော့ ဆွဲစားတယ်ပေါ့ … အပ်ချင်တဲ့လူတွေက လာအပ်နေကြတော့လည်း သူလည်းလုပ်စားလို့ ရတာပေါ့ ။ ကဲပါလေ ဒါတွေထားပါ … ။ ဒီလိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးသူတွေက ကျောင်းသားမိဘတွေပါ ။ သူတို့စိတ်ထဲ ဒီကျောင်းကတော့ လူတော်တွေမွေးထုတ်တယ် ဒီကျောင်းကတော့ အာပလာ စသဖြင့် သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီလို အခြေနေရအောင်ကို ဖန်တီးတာပါ ။ ဒင်းတို့က အဓိက တရားခံပါ ။ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ထွန်းဖို့ သင်ပြတဲ့ ဆရာမမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် မိဘတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုအပြင်ကျောင်းသားအပေါ်မှာလည်း မူတည်နေသေးတယ်ဆိုတာ မေ့လို့မရပါဘူး ။ ကျောင်းကတော့ လူတော်ထွက်တော့ နာမည်ကောင်းရတယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့် ဒီတော်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ ဆရာတွေက တခြားကျောင်းမပြောင်းတော့ဘူး ဒီမှာပဲ ပင်စင်မယူခင်ထိ တွယ်ကပ်နေတော့မတဲ့လား ။ မိဘများ ဦးနှောက်သုံးပြီး စဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ် ။ ဘယ်ကျောင်းမှာပဲနေနေ ..ကိုယ့်ကလေးခြေလှမ်း ကိုယ်သိလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် train လုပ်နိုင်မယ်လို့တော့ ကျွန်မတော့ ယုံကြည်မိပါတယ် ။
ကျောင်းကောင်းကိုထားချင်တော့ ကိုယ်နဲ့ မနီးလည်း တကူးတကသွားအပ်ကြတယ် အဲ့ဒါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ နေ့တိုင်း ကြိုပို့ပေးရမယ့်လူလိုလာတာပါပဲ … ။ တစ်ချို့ကလည်း ကျောင်းနဲ့ ဝေးလို့ …. အနီးဆုံးကျောင်းကို ပို့ဖို့ ပို့မယ်လူလိုတယ် ။ ဒီခေတ်မှာက မိသားစုဝင်တွေ အတော်များများ ကိုယ်စီအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ် ဒီတော့ ကျောင်းကို သတ်သတ် လိုက်ပို့ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အခါ အိမ်ရှေ့ထိလာ ကြိုပို့လုပ်ပေးတဲ့ ကျောင်းကားတွေကို သုံးလာကြတယ် ။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်ကတော့ နီးစပ်ရာလေးတွေကိုစုပြီး ကြိုပေးတာမျိုးရှိပေမယ့် ဒီခေတ်မှာတော့ ကျောင်းကားလုပ်မယ့်လူတွေက ကိုယ်ကြိုချင်သလိုကြို ပို့ချင်သလို ပို့ခွင့်မရတော့ပါဘူး ။ ကျောင်းအစည်းဝေးပွဲမှာ လေလံဆွဲတာမျိုး ၊ ဈေးပြိုင်ပေးပြီး ဘယ်မြို့နယ်ကျောင်းကား ပြေးဆွဲခွင့်ရအောင်လုပ်ရတယ် စသဖြင့် ကျောင်းအုပ်တွေက ချုပ်ကိုင်တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ် ။ ကလေးတွေရဲ့ ပရိုက်ဗိတ်ဆီအတွက်လည်း ကျောင်းကားတွေကို စိစစ်လိုက်တာလည်း ပါမှာပေါ့လေ … ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ…ကျောင်းကားတွေအရင်ကလို ဆွဲချင်သလို ဆွဲလို့ မရတော့ပါဘူး ။ ကျောင်းကိုဖန်ရှာပေးနိုင်မယ့် ကျောင်းကားတွေကသာ ဘယ်မြို့နယ်မှ ဘယ်မြို့နယ်တွင်းသတ်မှတ်ပြီး ကျောင်းကထုတ်ပေးတဲ့ တံဆိပ်တပ်ကာ ဆွဲခွင့်ရှိပါသတဲ့… ။ (နီးစပ်ရာကျောင်းကားသမားတွေကို အင်တာဗျူးမိလို့သိတာပါ .. … မှားတာရှိလျှင် ၀န္ဒာမိပါချင့် ဟိ )
လေးဘလက်ရေ …မိဘက သားသမီးတွေကို ပညာတတ်စေချင်လို့ ကျောင်းပို့တာမှန်ပေမယ့် … ကိုယ့်သားသမီး မျက်နှာမငယ်ရအောင် ..ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ရတဲ့အခါ …. တံပိုးထက် လက်ခကြီးတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တော့ … ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးဆိုတာ … အခက်ခဲတစ်ခုလို ဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ် ။ အခုလို နိုင်ငံတော်က အခမဲ့ပညာရေးတွေလုပ်နေတော့လည်း …. အခက်ခဲ အကုန်မဟုတ်လျှင်တောင် မိဘတွေ အသက်ရှု နည်းနည်းတော့ ချောင်ကောင်းပါရဲ့နော် …. ။ စိတ်ရော လူပါ နှစ်ပြီး ရေးလိုက်တာ.. အရမ်းရှည်သွားပြီ ..ဆောရီး ဟီးဟီး ပို့စ်အနေနဲ့ မခွဲတင်ချင်ဘူး ..လေးဘလက်ပို့ စ်နဲ့ ပဲတွဲတဲ့ကော့မန့်ရေးချင်လို့ … လက်လွန်သွားပြီ ဟီး
ကိုရင်ဘလက်ရေ… ဒီပို့စ်လေးက တော်တော်အကျိုးများတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ပါဗျ…
ကျနော်က ကျောင်းပညာရေးနဲ့ တော်တော်နီးပါတယ်… နီးဆို ကျနော်အစ်မက
အလယ်တန်းပြကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်ပါ။ သူရို့ကျောင်းက ရွှေပြည်သာ
အစွန်အဖျားလေးက ထခွဲကျောင်းလေးတစ်ခုပါ။ တခါတလေ ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးနှစ်လုံးတောင်
ပျက်ရင် ဘတ်ဂျက်မရှိသော ဆရာမတွေခမျာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ကျနော်ခမျာ သွားကြည့်ပြီး တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ ပြင်ပေးရပါတယ်။
တကယ့်ကို ကျေးလက်၊ နယ်စွန်နယ်ဖျားမှာ သင်နေရတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေခမျာ အလွန်
သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျနော့် အမဆို ကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အစိုးရ လစာလေးနဲ့
တစ်အိမ်ထောင်စားဝတ်နေရေးလည်း မလုံလောက်ပါ။ ကလေးသူငယ်များမှာလည်း ဆင်းရဲလွန်းလှသဖြင့် ကျူရှင်ဆိုတာလည်း မတက်နိုင်ကြပါ။ ထို့အပြင် ကျောင်းအုပ်ဆရာမ အပျိုကြီးက
လည်း အင်မတန်စနစ်ကြီးသည့်အတွက် တခြား ဘာကြေးညာကြေးမှလည်း မရရှိကြပါ။
(ပညာရေးလောကမှာ အဆီထုတ်ဝါးနေကြတာက မြို့ထဲက ဂုဏ်ရှိ အသိုင်းအ၀န်းတွေ
တက်ကြတဲ့ ကျောင်းမျိုးတွေမှာ သင်နေကြတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမများကတော့ ကျူရှင်တမျိုး
ဂွင်တစ်မျိုးနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေကြပေမဲ့ နာသုံးနာနဲ့ သင်ကြားပေးနေရတဲ့ နယ်စွန်နယ်ဖျား
မြို့စွန်မြို့ဖျား ကျေးလက်မှာ သင်ကြားနေရတဲ့ ဆရာဆရာမတွေအတွက် ဖူလုံမှုမရှိပါဘူးဗျာ..
ထိုသို့သော ကျောင်းများတွင်တော့ မတတ်နိုင်သော သူများကလည်း အလှူငွေမထည့်ဖို့နဲ့
တတ်နိုင်သော သူများကလည်း စေတနာငွေသဘောမျိုးဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးတက်ရမယ့်
မိမိကျောင်းအတွက် အမှိုက်ပုံး၊ ရေပုံး၊ ရေစစ်၊ တံမြက်စည်း၊ မြေဖြူ၊ စားပွဲခင်း စသည့်သဖြင့်
လိုအပ်သမျှအားလုံးအတွက် ကျောင်းဖွင့်တာနဲ့ အလှူငွေထည့်ပေးဖို့ ကျနော် အကြံပြုပါတယ်ခင်ဗျာ…
၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်ပြီး
ဥာဏ်ထက်မြက်ပြီး ပညာဆက်လက်သင်ယူရန် အခက်အခဲ ရှိသူတွေအတွက်
မူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ တစ်ဦးကို တစ်လ ကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်း
အလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ တစ်ဦးကို တစ်လ ကျပ် ၆၀၀၀ နှုန်း
အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ တစ်ဦးကို တစ်လ ကျပ် ၈၀၀၀ နှုန်း
အဲ… ပညာသင်ဆု ဆိုတာကြီး လည်း ရှိသေးသဗျ။
အလယ်တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် (ပဉ္စမတန်းမှ အဌမတန်းအထိ) ပညာသင်ကာလ လေးနှစ်အတွင်း တစ်လ ကျပ် ၁၀၀၀၀ နှုန်း၊
အထက်တန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် (န၀မတန်း နှင့် ဒသမတန်း)
ပညာသင်ကာလ ၂ နှစ်အတွင်း တစ်လ ကျပ် ၁၅၀၀၀ နှုန်း
ကိုယ့်သားလေး သမီးလေးတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်ကားကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ကျောင်းကြိုပို့ လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ကျောင်းအစ်မရယ်။ အဲ…အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ကျောင်းကားတွေကို အားကိုးကြရတော့တာပဲပေါ့ဗျာ။
ဒီနေရာမှာတော့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင်ကားတစ်စီး
မလိုအပ်ဘဲကျောင်းချိန်ဆို ကျောင်းရှိတဲ့ လမ်းတွေမှာကားတွေပိတ်ကျပ်နေတာ….
ဒါ့အပြင် ကျောင်းကားမတူစီးကြတော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတိုးတယ်..